Nagarik Shukrabar - ‘दर्शक हँसाउन सेक्स कन्टेन्ट सजिलो हुन्छ’
शनिबार, ३० असोज २०७८, ०५ : ५१
शुक्रबार, १५ चैत २०७५, ०७ : ५५ | अनिल यादव
अपूर्व क्षितिज सिंह– स्ट्यान्ड अप कमेडीमा चम्कदै गरेको युवा नाम हो । युट्युबमा चर्चित ‘कमेडी सर्कल’का उनी प्रिय कलाकार हुन् । सरकारले पोर्न प्रतिबन्ध गरेपछि त्यसकै विरुद्धमा उनले ‘पोर्न ब्यान इन नेपाल’ शीर्षकमा बनाएको कमेडी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको थियो । यही भिडियोका कारण उनलाई बाटोमा भेट्ने फ्यानहरु अझै ‘ओई, पोर्नवाला दाइ’ भनेर बोलाउँछन् । कमेडी अपूर्वको एक मात्र पेशा होइन । उनको खास पेशा त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो । ‘टेन टु फाइभ’ जागिरे उनी आईतबार दिउँसो ‘लन्च ब्रेक’को समय मिलाएर जाउलाखेलको एक क्याफेमा गफिन आएका थिए । त्यहाँ उनीसँग अनिल यादवले गरेको अन्तरंग कुराकानीः
आफैँले बताउनु पर्दा तपाईंको खास परिचय के हो ? चार्टड एकाउन्टेन्ट या कमेडियन ?
म अहिले चौधरी ग्रुपको इन्टर्नल अडिट डिपार्टमेन्टमा सिए छु । यो मेरो जागिर हो । मैले अहिले कमेडीलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छु । पहिलो त सिए नै आउँछ ।
कमेडी किन दोस्रोमा ?
पैसाको, दर्शकको र जीवनस्तरका कारण किनभने कमेडीले पेट पाल्न सकिँदैन । त्यति अडियन्स अहिले भइसकेका छैनन् । बिस्तारै बढिरहेका छन् । भोलि बिस्तारै कमेडीमा राम्रो हुँदै गयो भने पक्कै पनि पहिलो प्राथमिकता कमेडी पनि पर्ला ।
दुवैतिर कसरी भ्याउनुहुन्छ त ?
अहिले म सोहरु प्रायः कि बिदाको दिन कि त साँझतिर पार्छु । दिउँसो त अफिस जानैपर्छ ।
सो नियमित नै हुन्छ र ?
समय मिलाएर भइरहेकै हुन्छ । धेरैजसो झम्सिखेल, लाजिम्पाट लगायतका ठाउँमा भइरहेको हुन्छ ।
सबै सो युट्युब च्यानलमा अपलोड हुँदैन हो ?
हो । छानेर मात्रै हुन्छ । हामी ‘फाल्दिने’ भन्छौँ क्या ! यो युट्युबका लागि उपयुक्त छ भन्ने लाग्यो भने म्यानेजमेन्टसँगको सल्लाहमा युट्युबमा फाल्दिने गर्छौं ।
दर्शक हँसाउने रहर कहाँबाट जाग्यो त ?
कमेडियन बन्छु भन्ने त कहिल्यै थिएन तर बच्चैदेखि साथीहरुमाझ जोक्स सुनाउन, रमाइलो माहोल सिर्जना गर्न मनपथ्र्यो । सानैदेखि लाफ्टर च्यालेन्ज हेरिरहन्थेँ । पहिलेदेखि स्ट्यान्डअप कमेडी हेरिरहिन्थ्यो । म दिल्लीमा सिए पढिरहेकै बेलामा नेपालमा स्ट्यान्डअप कमेडी चलिरहेको चाल पाएँ । पढाइ सकेर फर्किएपछि ‘यसो ट्राइ गरौँ न त’ भनेर गरेको रमाइलो लाग्यो । यसरी सुरु गरेको भन्नुपर्ला (हाँस्दै) ।
‘कमेडी सर्कल’मा अडिसन दिएरै सेलेक्ट हुनुभएको हो ?
हो, यसको म्यानेजमेन्ट छुट्टै छ, कलाकारहरुको टिम छुट्टै छ । मैले अडिसन दिएर अवसर पाएको हुँ ।
नेपालमा पोर्न प्रतिबन्ध भएपछि त्यसको विरुद्धमा तपाईंले गर्नुभएको कमेडी त सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भयो । कसरी फुर्यो यो आइडिया ?
दर्शक हँसाउनलाई सेक्स कन्टेन्ट सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई पहिलेदेखि थाहा थियो । सेक्सबारे जे भन्दिए नि दर्शक हाँस्दिन्छन् । चाहे त्यो लजाएर हाँसेको होस् या मन परेरै । त्यसकारण मेरो माइन्डमा पहिल्यैदेखि के थियो भने सेक्स जोक्स इजी हुन्छ, त्यसैले गर्नुहुँदैन है ! तर, जब सरकारले पोर्न प्रतिबन्ध गरेको खबर आयो, त्यसपछि सामाजिक संजालमा ठूलो बहस भइरहेको देखेँ । त्यसपछि लेख्न थालेँ । सुरुमा जे लेखेँ, त्यो चित्त बुझेन । ८० पर्सेन्ट स्क्रिप्ट चेन्ज गरेँ । त्यो भने मनपर्यो । अनि ओपन माइकमा बोल्दा त्यसलाई सबैले मन पराए । खासमा ‘इरिटेड’ नै भएर लेखेको हो मैले । तर, यति हिट होला भन्ने लागेको थिएन । जतिबेला यो प्रोग्रामको लाइभ सो भइरहेको थियो, सहभागीको रिएक्सन देख्दा दर्शकले रुचाउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, त्यतिबेलाको सब्सक्राइबर्सका हिसाबले पाँच दिनमा पाँच लाख भ्युज जाला भन्ने अपेक्षा भने थिएन ।
आफूले हेर्न नपाउने भएपछि झोँकमा बनाएको त होइन ?
हेर्न त पाइरहेकै छ नि, कसले छेक्या छ र हेर्नलाई !
ए साँच्ची त्यो कुरा त तपाईले भिडियोमै पनि गर्नुभएको छ नि ?
हो नि । रोकेर रोकिने कुरै होइन नि यो ।
भिडियोमा सुनाएको कहानीझैँ लुकीलुकी भिडियो कत्तिको हेरिन्थ्यो नि ?
अहिले त लुकीलुकी के खुलेआम हेरिन्छ नि ! (हाँस्दै)
अँ, पहिले त लुकीलुकी हेरिन्थ्यो । भिडियोमा मैले जे भनेको छु, त्यो रियल हो । ममीबुबा नभएको मौका छोपी ढोका थुनेर हुन्छ या घर खाली भएको साथीभाइको घरमा गएर हुन्छ, लुकीलुकी हेरिन्थ्यो ।
अहिले पनि हेरिन्छ ?
अँ, हेरिन्छ । हिजो राति त हेरेर आ’को (लामो हाँसोसहित) ।
भनेपछि सरकारले जति प्रतिबन्ध लगाएको गफ दिए पनि तपाईंको जीवनमा पोर्न भिडियो प्रतिबन्ध भएको छैन ?
मन परेको साइट हेर्न नपाएको होला तर प्रतिबन्ध भने भएको छैन ।
अहिले कसरी हेरिरहनुभएको छ त ?
अनलाइन नै हेरिन्छ । सबै साइट ब्यान्ड नै भएको छैन, अनि ।
कुनकुन साइट बाँकी छन् त ?
(हाँस्दै) फेरि त्यो पनि ब्यान्ड गर्देलान् ! हुन त भिपिएन छ, भन्दा त केही नहोला । तपाईं हेर्ने हो भने एउटा दामी साइट छ, मलाई पनि एउटाले दिएको हो, भन्छु ल । कसले दिएको नाम नभनौँ, तपाई चिन्नुहुन्छ फेरि । सेक्स्टी डट मी भन्ने साइट छ एउटा, त्यहाँ खोल्नुभयो भने ‘ब्रेजल्स’, ‘नट्टी अमेरिका’ सबको पोर्न भिडियो हाइ क्वालिटीमा पाइन्छ (हाँस्दै) ।
तपाईंको निष्कर्षमा सरकारको यो निर्णय वाहियात देखियो, हैन त ?
निर्मला हत्यकाण्डसँग जोडेर प्रतिबन्ध गरिनु वाहियात नै हो । यसले बलात्कार कन्ट्रोल हुन्छ भनेर सोच्नु गलत नै हो ।
कुन अर्थमा सही हो त त्यसोभए ?
१०–१२ वर्षको फुच्चाफुच्चीमा पनि सहज पहुँच भयो क्या ! त्यसलाई रोक्ने अर्थमा सहि हुन सक्ला, तर यसरी कहाँ रोकिन्छ र !
स्टेज प्रस्तुतिका लागि कमेडीको विषय तपाईं कसरी छनोट गर्नुहुन्छ नि ?
नेपालमा धर्मका बारेमा, राजनीतिका बारेमा, फेमिनिज्मका बारेमा बोल्नुपर्दा धेरै सोचेर बोल्नुपर्छ । धर्म र राजनीतिका बारेमा त खुलेर बोल्नै पाइँदैन । ती कुरा मलाई भनौँ कि भन्ने भइरहेको छ । विप्लवमाथि लेखिरहेको छु, चाँडै गर्छु होला । कुनै कन्टेन्ट लेख्न मलाई दुई दिन पनि लाग्दैन, कुनै चार महिना लागेको पनि छ ।
तपाईंलाई आफ्नो सबैभन्दा मनपर्ने प्रस्तुति कुन हो ?
मलाई सबैभन्दा मनपरेको कन्टेन्ट ‘बिइङ अ मधेसी’ हो । त्यो मेरो पहिलो कन्टेन्ट पनि थियो । त्यसैले खासै चर्चा बटुलेन । आफ्नो प्राक्टिकल लाइफसँग जोडिने भएकाले पनि मलाई मन परेको हो । म मधेसी भएकाले त्यो कन्टेन्ट मेरा लागि ‘फ्यामिलियर’ पनि थियो । मनैदेखि बोलेको थिएँ मैले । तर के गर्ने ! यहाँ यस्तै हो, मन परेकाहरु हिट हुँदैनन् ।
हँसाएरै फ्यान कमाइँदैछ, हैन त ?
कस्ता–कस्ता फ्यान छन् ?
सबै उमेर समूहका छन् । बूढाबूढीले पनि ‘त्यो मन प¥यो’ भनेर रेस्पोन्स दिँदा बडो खुसी लाग्छ ।
बाटोमा हिँड्दा मान्छेहरुले कत्तिको चिन्छन् ?
चिन्छन् नि ! नाम फ्याट्ट याद नहुने अधिकांशले ‘ओई, पोर्नवाला दाइ’ भनेर बोलाउँछन् । त्यसरी बोलाउँदा अप्ठेरो पनि लाग्छ ।
भनेपछि परिचय नै ‘पोर्नवाला दाइ’ भइसक्यो ?
झन्डैझन्डै भइसक्यो (हाँस्दै) ।
अडियन्ससँग ठोक्किदाको कुनै रमाइलो अनुभव छ ?
चार महिनाअघि पोखराको सोमा जाँदाको एउटा रमाइलो घटना छ । सो सुरु भएको थिएन । म पिसाब फेर्न ट्वाइलेट गएको थिएँ । एउटा भाइ ट्वाइलेटभित्र छिर्यो ।उसले मलाई ट्वाइलेटमा त्यसरी भटिएला भन्ने अपेक्षा गरेको रैनछ । म पिसाब गरिरहेको थिएँ । उसले देख्नासाथ भनिहाल्यो– ‘ओहो दाइ, म त तपाईंकै हेर्न आ’को ।’ म त ट्वाँ परेँ (हाँस्दै) । ट्वाइलेटमा पिसाब फेरिरहेका बेला तपाईंकै हेर्न आको भनेपछि अर्को अर्थ लाग्दैन त ?लागिहाल्छ नि ! त्यसपछि मैले ‘के भन्छ यो भाइ ?’ भनेर हल्का ठट्टा गरेँ । त्यही सोमा पनि सुनाएँ यो घटना । दर्शक त जोडले हाँसे ।
तपाईंहरुलाई युट्युबबाट मिडियम चेन्ज गरेर टिभी र फिल्ममा आउने मन छैन ?
अहिले छैन । अफर त लगभग सबै टिभीबाट आइरहेको छ तर जाने सोच छैन । हेर्दै जानुस्, बिस्तारै टिभी नै युट्युबमा आउँछ । फेरि टिभीमा गइसकेपछि हाम्रो कन्टेन्ट नै धेरै सेन्सर हुन्छ क्या ! अनि सेन्सरसिपमा हामी काम गर्नै सक्दैनौँ । हामी आफैँ प्रतिबन्धविरुद्ध बोल्ने अनि आफैँ प्रतिबन्धित हुनुप¥यो भने मज्जा पनि त आउँदैन, हैन र ?
फिल्मकै कुरा गर्दा अहिले बजार कमेडियनहरुको कब्जामा देखिन्छ । फिल्मी बजारमा कमेडी खुब बिकिरहेको छ । यस्तो मौकामा चौका हान्ने मन छैन ?
त्यस्तो लोभलालच केही पनि छैन हामीमा । युट्युबमै काम गर्ने हो, स्टेजमै रमाउने हो हामी । मुभीतिर फोकस हुन मन छैन ।
तपाईं स्टेजमा त खुब हसाउनुहुन्छ तर रियलमा कतिको हाँस्नुहुन्छ नि ?
(एकछिन सोचमग्न भएपछि) गाह्रो प्रश्न आयो यो त ! स्टेजबाहिर मलाई आफू इन्टरटेन हुन गाह्रै भइरहेको हुन्छ । आफूलाई खुसी राख्न प्रायः म साथीहरुसँगै इन्गेज भइरहेको हुन्छु ।
भनेपछि रियल लाइफमा कमै हाँस्नुहुन्छ ?
अँ, अलि कमै छ ।
अरुलाई हँसाउने मान्छे किन यति साह्रो दुःखी नि ?
दुःखी त त्यति साह्रो त छैन । बरु पहिले पढाइको प्रेसर थियो होला । गर्लफ्रेन्डको पनि थियो होला तर अहिले त्यस्तो केही छैन ।
ए, भनेपछि ब्रेकअप भएको हो ?
अब वन साइडेड लभलाई ब्रेकअप भन्छ भने त भएकै होला (हाँस्दै) ।
भनेपछि मन पराएको केटीलाई आफ्नो बनाउन सकिएन ?
अँ, हरेस नै खाइयो भन्नुपर्ला (हाँस्दै) ।
अहिले सिंगल हो ?
अँ, अहिले त सिंगल ।
तपाईंको अनुभवमा हँसाउनेका दुःखहरु के–के हुन्छन् नि ?
धेरै हुन्छन् । सबैभन्दा पहिलो त जहाँ भेट्दा पनि ‘एउटा जाओस् न’ भन्ने नै हो । साथीहरुको ग्रुपमा बसेको हुन्छ, ‘एउटा कमेडी जाओस् न’ भन्दिन्छन् । साथीको घरमा खाना खान गएको हुन्छ, अंकल आन्टीकै छेउमा एउटाले यसले त कमेडी गर्छ भनेर परिचय गराइदिन्छन् । अनि त्यसपछि प्रस्ताव आइहाल्छ, ‘ल, एउटा जाओस् न !’ मेरो जोक्सहरु ‘क्लिन’ छैन, यहाँ अंकल–आन्टीको छेउमा कसरी भन्ने भनेर भन्दा पनि साथीहरु उल्टै सम्झाउँछन्, ‘मिलाएर भन्दे न् !’
कमेडियन छविका कारण आफूले सिरियस गफ गर्दा पनि मान्छेहरुले ठट्टा ठान्ने समस्या हुन्न ?
अँ, यस्तो भइरहेको हुन्छ । स्टेजमा हामी जसरी बोल्छौँ, दर्शकले हामीबारे त्यही धारणा दिमागमा बनाइसकेका हुुन्छन् । त्यसैले सिरियस गफ गर्दा पनि यसले जोक गर्यो, हावा बोल्यो भन्ने ठान्दारैछन् । यस्ता समस्या मैले धेरैपल्ट भोग्नुपरेको छ ।